सल्लाह डोज, फारम, र शक्तिहरू | एकलकेयर - औषधि जानकारी | सेप्टेम्बर 2021
समुदाय, कल्याण प्रेस स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण समाचार, कल्याण कम्पनी कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, औषधि जानकारी खेलहरु स्वास्थ्य चेकआउट औषधि जानकारी, समाचार समुदाय, कम्पनी कल्याण घरपालुवा जनावर कम्पनी, चेकआउट
मुख्य >> औषधि जानकारी >> सल्लाह खुराक, फारम र शक्तिहरू
सल्लाह खुराक, फारम र शक्तिहरू
सल्लाह फार्महरू र शक्तिहरू | वयस्कहरूको लागि सल्लाह | बच्चाहरूको लागि सल्लाह | सल्लाह खुराक चार्ट | पीडा, पीडा, र ज्वरोको लागी सल्लाहकार डोज | घरपालुवा जनावरहरूको लागि सल्लाह | कसरी सल्लाह लिने | प्रायः सोधिने प्रश्नहरू
एडभिल (सक्रिय संघटक: आईबुप्रोफेन) एक ब्रान्ड नाम ओभर-द-काउन्टर औषधि हो जुन अस्थायी रूपमा राहत पाउनका लागि प्रयोग गरिन्छ। ज्वरो वा सामान्य दुखाइ र दुखाइ टाउको दुख्ने, दाँत दुख्ने, पीठ दुख्ने, मांसपेशी दुख्ने, जुकाम, गठिया, वा मासिक पेट दर्दको कारण। सलाह मात्र लक्षणहरु राहत र कुनै अन्तर्निहित चिकित्सा अवस्था उपचार वा उपचार गर्दैन। एडभिल एक ट्याब्लेट, क्यालेट, जेल क्यापलेट, वा तरल जेल क्याप्सुलको रूपमा मुखले लिन्छ। यो खाना बिना वा बिना लिन सकिन्छ।
सम्बन्धित: सल्लाहकार भनेको के हो? | सल्लाह कुपनहरू
सल्लाह खुराक फाराम र शक्तिहरू
एडभिल ट्याब्लेटहरू, क्याप्लेटहरू, वा जेल क्याप्लेटको रूपमा बेच्दछन् प्रत्येक गोलीमा २०० मिलीग्राम इबुप्रोफेनको साथ।
अतिरिक्त सल्लाहकार उत्पादनहरूमा एडभिल लिक्वि-गेल्स, एडविल लिक्वि-जेल मिनीस, एडविल ईजी-ओपन ओर्थ गठिया क्याप (ट्याब्लेट वा जेल क्याप्सुल), र एडविल माइग्रेन (जेल क्याप्सूल) समावेश छन्। प्रत्येक उत्पादनमा प्रति ट्याब्लेट वा जेल क्याप्सूलको २०० मिलीग्राम आइबुप्रोफेन हुन्छ।
एडभिल डुअल एक्शनले प्रत्येक क्यालेटमा २ mg० मिलीग्राम एसिटामिनोफेनको १२ 125 मिलीग्राम इबुप्रोफेनको संयोजन गर्दछ।
वयस्कहरूको लागि सल्लाह खुराक
एडभिलसँग एक ट्याब्लेट, क्यापलेट, वा जेल क्याप्सुल (२०० मिलीग्राम) को एक सिफारिश गरिएको वयस्क खुराक प्रत्येक चार देखि छ घण्टा लिईन्छ जबकि लक्षणहरू रहिरहन्छन्। यदि एक ट्याब्लेट, क्यालेट, वा क्याप्सुलले पर्याप्त दुखाइ वा ज्वरो राहत प्रदान गर्दैन भने, खुराक हरेक छ घण्टामा दुई ट्याब्लेट, क्याप्लेट, वा जेल क्याप्सुल (दुई घण्टामा अधिकतम छ ट्याब्लेटको साथ) मा दोब्बर गर्न सकिन्छ।
१२ बर्ष वा माथिका वयस्क र किशोरकिशोरीहरूको लागि मानक सल्लाह खुराक एक देखि दुई ट्याब्लेटहरू, क्याप्लेटहरू, वा जेल क्याप्सूल (२०० 200-00०० मिग्रा) प्रत्येक चार देखि छ घण्टामा लक्षणहरू पछिल्लो हुन्छन्। तल अधिकतम खुराक हेर्नुहोस्।
वयस्क र किशोरका लागि अधिकतम सल्लाह १२ वा सो भन्दा बढी उमेर: २ tablets घण्टामा छ भन्दा बढी ट्याब्लेटहरू (१२०० मिग्रि कुल) छैन। १० दिन भन्दा बढि प्रयोग नगर्नुहोस्, जबसम्म स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको सुपरिवेक्षणमा हुँदैन।
यदि तपाईंलाई कलेजो वा मिर्गौला रोग छ भने उपयुक्त आईबुप्रोफेन खुराकको बारेमा एक डाक्टरसँग परामर्श गर्नुहोस्।
बच्चाहरूको लागि सल्लाह डोज
माथि वर्णन गरिएका सल्लाहहरू उत्पादनहरू वयस्क र १२ बर्ष वा माथिका बच्चाहरूको लागि सिफारिस गरिन्छ।
बच्चाहरूको लागि यो सिफारिस गरिन्छ कि हेरचाहकर्ताहरूले विशेष गरी प्रत्येक to देखि hours घण्टामा बच्चाहरूको लागि तयार पारिएका तीन सल्लाहकार उत्पादनहरू मध्ये एउटा प्रशासित गर्नुहोस्:
शिशुहरूका एडभिल ड्रपहरू बच्चाहरूका लागि -2-२ months महिना पुरानो (मौखिक निलम्बन mill० मिलीग्राम (मिलीग्राम) आईबुप्रोफेन प्रति १.२ mill मिलीलीटर (एमएल) तरल)।
बच्चाहरूको सल्लाहकार निलम्बन २-११ वर्ष उमेरका बच्चाहरूका लागि (१० मिलीग्राम आईबुप्रोफेन प्रति m एमएल तरलको साथ मौखिक निलम्बन;चिनी-रहित र डाई-फ्रि सहित विभिन्न स्वादहरूमा उपलब्ध छन्)।
कनिष्ठ शक्ति परामर्श Chewables बच्चाहरूको लागि २-११ उमेरका बच्चाहरूका लागि १०० मिलीग्राम आइबुप्रोफेन प्रत्येक अ each्गुर-स्वादयुक्त चवाबल ट्याब्लेटमा।
उमेर बाट सल्लाह खुराक
आयु (वर्ष) सिफारिश गरिएको खुराक * अधिकतम खुराक
१२-१-17 १-२ ट्याब्लेटहरू, क्याप्लेटहरू, वा क्याप्सूल (२०० 200-00०० मिग्रा) प्रत्येक -6--6 घण्टामा आवश्यक छ भने दुई भन्दा बढि ट्याब्लेटहरू, क्याप्लेटहरू, वा क्याप्सुल (mg०० मिलिग्राम) हरेक hours घण्टामा र हरेक २-घण्टा अवधिमा tablets ट्याब्लेट (१२०० मिलिग्राम) भन्दा बढि हुँदैन।
<12 डाक्टरलाई सोध्नुहोस् डाक्टरलाई सोध्नुहोस्
सल्लाह खुराक चार्ट
संकेत उमेर मानक खुराक अधिकतम खुराक
सानो दुखाइ र पीडा वा ज्वरो ≥१२ बर्ष २००--4०० मिलीग्राम (१-२ ट्याब्लेटहरू, क्याप्लेटहरू, वा क्याप्सुल) प्रत्येक -6--6 घण्टा १२०० मिलीग्राम (tablets ट्याब्लेटहरू, क्याप्लेटहरू, वा क्याप्सुल) २ 24 घण्टामा
पीडा, पीडा, र ज्वरोको लागि सल्लाहकार डोज
वयस्क र १२ बर्ष वा माथिका वयस्कहरूको लागि, एडविललाई अस्थायी रूपमा सामान्य दुखाइ र पीडा कम गर्नका लागि टाउको दुखाइ, मांसपेशीको दुखाइ, दाँत दुख्ने, मासिक / मासिक पेटका वा सामान्य चिसोका कारण प्रयोग गर्न सकिन्छ। सल्लाह अस्थायीको लागि पनि लिन सकिन्छ ज्वरो वा चिसोबाट राहत ।
वयस्क र किशोरावस्था (१२ बर्ष र माथिका): २००-4-00०० मिलीग्राम प्रत्येक चार देखि छ घण्टा। २ hour घण्टा अवधिमा अधिकतम डोज १२०० मिलीग्राम।
बाल रोगी बिरामीहरू (११ बर्ष र अधिक उमेर) : बाल रोग विशेषज्ञलाई सोध्नुहोस्।
ज्यादै बिरामी बिरामीहरू :
-०-60० मिलि / मिनेटको क्रिएटिनिन निकासी: सावधानीका साथ प्रयोग गर्नुहोस् (तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्)
M० मिलि / मिनेट भन्दा कम क्रिएटिनिन निकासी: प्रयोग नगर्नुहोस्
डायलिसिस बिरामीहरू: प्रयोग नगर्नुहोस्
हेपाटिकली बिरामी बिरामीहरू : सावधानीका साथ प्रयोग गर्नुहोस् (तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्)
गर्भवती महिलाले एडभिल लिनु हुँदैन चिकित्सकले निर्देशन नगरेसम्म
एडभिल २० हप्ता गर्भावस्था पछि प्रयोग गर्नु हुँदैन किनकि यसले किडनी र फोक्सोमा गम्भीर जटिलता निम्त्याउँछ। सल्लाह पछि पनि लिनु हुँदैन गर्भावस्था को २० हप्ता किनभने यसले गम्भीर जटिलता र सम्भावित मृत्युलाई नजन्मेको बच्चालाई निम्त्याउन सक्छ।
केवल एडिलको थोरै मात्रा मात्र आमाको दुधमा अवस्थित हुन्छ, त्यसैले एडभिललाई मनपर्दो पीडा राहत औषधि मानिन्छ नर्सि mothers आमाहरू । निर्माता यद्यपि यो लिनु अघि डाक्टरसँग कुरा गर्ने सल्लाह दिन्छ।
मुटुसम्बन्धी रोग, कन्जेस्टिभ मुटुको असफलता, ग्यास्ट्रिटिस, अल्सर, उच्च रक्तचाप, दम, धमनी संकुचन, इन्फ्लेमेटरी आंत्र रोग (IBD), वा रगत पातलो लिने व्यक्तिले एडविल लिनु अघि डाक्टरसँग सल्लाह लिनु पर्छ।
घरपालुवा जनावरहरूको लागि सल्लाह
एडभिल, मोट्रिन, वा कुनै अन्य ओटीसी आईबुप्रोफेन कहिल्यै घरपालुवा जनावर वा अन्य जनावरहरूलाई दिनु हुँदैन। इबुप्रोफेन हो FDA- अनुमोदित छैन जनावरहरूमा प्रयोगको लागि र कुकुर, बिराला, चराहरू, र अन्य सामान्य घरपालुवा जनावरहरूको लागि विषाक्त छ। NSAIDs ले पेटको गम्भीर अल्सर, पेटको रक्तस्राव, वा पेटको छिद्रका साथै पालतु पशुहरूमा कलेजो वा मिर्गौलाको क्षति निम्त्याउन सक्छ। बिरालाहरू विशेष रूपमा आईबुप्रोफेन मेटाबोल गर्न असमर्थ छन्। यदि तपाईंको घरपालुवा जनावरलाई ज्वरो वा पीडाबाट राहत चाहिएको छ भने, पशु चिकित्सकसँग कुरा गर्नुहोस्। तिनीहरूले एफडीए-अनुमोदित एनएसएआईडी इबुप्रोफेन जस्तै (तर विशेष गरी जनावरहरूको लागि बनाइएको) वा पशुको लागि उपयुक्त खुराकमा अर्को बढी उपयुक्त औषधि लेख्नेछन्।
कसरी सल्लाह लिने
एडभील पानी द्वारा ट्याब्लेट, क्यालेट, जेल क्यापलेट, वा तरल जेल क्याप्सूलको रूपमा लिन्छ। निर्माता सिफारिश खुराक एक ट्याब्लेट (२०० मिलीग्राम) हरेक चार देखि छ घण्टा छ जबकि लक्षण रहिरहन्छ।
जब एडभिल ट्याब्लेट, क्यालेट, वा जेल क्याप्सुल लिनुहुन्छ:
शल्यक्रिया पछि कब्जियत को लागी के खाने?
यदि तपाईं प्रिस्क्रिप्शन बिना यो औषधि प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने औषधी लेबलमा दिइएका निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्।
एक ट्याब्लेट, क्याप्सूल, वा जेल क्याप्सुलको पानीको गिलासको साथ लिनुहोस्।
एक ट्याब्लेट, क्याप्सूल, वा जेल क्याप्सुल लिन चार चार घण्टा सम्म लक्षण जारी रहन्छ।
यदि एक ट्याब्लेट, क्याप्सूल, वा जेल क्याप्सुलले पर्याप्त लक्षण राहत प्रदान गर्दैन भने, तपाईले प्रत्येक ट्याब्लेटलाई दुई ट्याब्लेट, क्याप्सूल, वा जेल क्याप्सुलहरू हरेक छ घण्टामा दोब्बर गर्न सक्नुहुन्छ।
एडभेल खानाको साथ वा खाली पेटमा लिन सकिन्छ। यदि यसले तपाईंलाई चिन्तित पेट दिन्छ भने, तपाईं खाना वा दुधको साथ एडविल लिन सक्नुहुन्छ।
छुटेको खुराक यदि तपाइँ नियमित रूपमा यो औषधि लिनुहुन्छ र एक खुराक याद गर्नुभयो भने, सकेसम्म यसलाई लिनुहोस्। यदि तपाईंको अर्को खुराकको लागि यो लगभग समय हो भने, तबसम्म औषधी प्रयोग गर्न कुर्नुहोस् र छुटेको खुराक छोड्नुहोस्। छुटेको खुराकको लागि अतिरिक्त औषधि प्रयोग नगर्नुहोस्।
सल्लाह लिँदा वा प्रशासन गर्दा, निम्न सुरक्षा सल्लाहहरू विचार गर्नुहोस्:
कोठाको तापक्रममा ताप, चिसो निहित कन्टेनरमा औषधि भण्डारण गर्नुहोस्, ताप, ओसिलोपना र प्रत्यक्ष प्रकाशबाट टाढा राख्नुहोस्।
सँधै म्याद सकिने मिति जाँच गर्नुहोस्। यदि औषधिको म्याद समाप्त हुने मिति सकिसक्यो भने, यसलाई सुरक्षित रूपमा निकाल्नुहोस् र नयाँ बोतल खरीद गर्नुहोस्।
अनावश्यक ओभरडोजबाट बच्न, एक औषधि डायरी राख्नुहोस् वा अनुप्रयोग प्रयोग गर्नुहोस् जब तपाईं प्रत्येक खुराक लिनुहुन्छ। उचित समयसम्म अर्को खुराक नलगाउनुहोस्।
एउटा गोली वा क्याप्सुल लिदा, गोलीलाई घुटकी भित्रबाट जान अनुमति दिन कम्तिमा आधा घण्टा सुताउन कोशिस गर्नुहोस्।
सल्लाह डोज FAQ हरू
एडभिललाई काम गर्न कति समय लाग्छ?
सल्लाह ट्याब्लेटहरू काम गर्न सुरु गर्नुपर्दछ लगभग १-30- minutes० मिनेट र एक देखि दुई घण्टामा ज्वरो घटाउने वा दुखाइ राहतमा शिखर प्रभावकारितामा पुग्नुहोस्। तरल जेल क्याप्सुल, जबकि, केहि चाँडो काम शुरू गर्दछ र एक घण्टा मा आफ्नो चरम पुग्न।
तपाईंको प्रणालीमा सल्लाहकार कति समय बस्दछ?
सिफारिस गरिएको खुराकमा, एडभिलले चारदेखि hours घण्टासम्म प्रभावकारी ज्वरो वा सानो दुखाइ नियन्त्रण गर्नुपर्दछ, तर औषधि पूर्ण रूपमा शरीर छाड्न यसले एक दिन लिन सक्दछ। छ घण्टा सम्म, एडभिल डोजको सानो अंश मात्र रक्तप्रवाहमा रहन्छ।
शरीरले इबुप्रोफेनलाई द्रुत रूपमा मेटाबोलिज गर्दछ, अर्थात् शरीरले रासायनिक रूपमा यसलाई अर्को निष्क्रिय रसायनमा परिवर्तन गर्‍यो (जसलाई मेटाबोलिट भनिन्छ)। हेल्थकेयर प्रोफेशनल्सले शरीरको इबुप्रोफेनको आधा जीवन द्वारा मेटाबोलिज्म नाप्छन्, शरीरको शरीरमा आबुप्रोफेनको आधा मात्रा चयापचय गर्न यसले कति समय लिन्छ। Ibuprofen को आधा जीवन वयस्कमा दुई घण्टा मात्र हुन्छ। यसको मतलब दुई घण्टामा, लिइएको आधा खुराक गयो।
बच्चाहरूले रक्तप्रवाहबाट आइबुप्रोफेन खाली गर्न to देखि take घण्टा लिन सक्दछन्। वरिष्ठहरु, जे होस्, शरीरबाट आइबुप्रोफेन खाली देखिन्छ अन्य वयस्कहरु को समान दर मा।
के हुन्छ यदि मैले एडभलको एक डोज याद गरे?
एडभिल भनेको कुनै अन्तर्निहित अवस्थाको लागि उपचारको सट्टा लक्षण-राहत औषधिको रूपमा प्रयोग गर्नु हो। यस कारणका लागि, एडभिल केवल कम सम्भव सम्भावित खुराकमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्दछ र लक्षणहरू रहुन्जेल मात्र। यदि एक खुराक हरायो भने सबैभन्दा खराब हुन सक्छ लक्षणहरूको फिर्ती। यदि तपाईं एक खुराक याद गर्नुभयो र लक्षणहरू फर्किएन भने, तपाईंलाई अर्को खुराकको आवश्यक पर्दैन।
यदि, अर्कोतर्फ, तपाईं एक खुराक र लक्षण फिर्ती याद गर्नुभयो, चिन्ता नलिनुहोस्। अगाडि जानुहोस् र अर्को ट्याब्लेट वा क्याप्सुल लिनुहोस्। यसले डोजि clock घडी रिसेट गर्दछ, त्यसैले अर्को चार देखि छ घण्टाको लागि अर्को खुराक नलगाउनुहोस्। छुटेको खुराक वा कुनै अन्य कारणको लागि अप्वाइलको डबल डोज कहिले पनि नलगाउनुहोस्।
म कसरी सल्लाह लिनबाट रोक्न सक्छु?
यदि एडभिल कहिलेकाँही सामान्य दुखाइ र दुखाइ वा ज्वरोलाई कम गर्न प्रयोग गरिएको छ भने, यो लक्षणहरू फेर्ने बित्तिकै यसलाई बन्द गर्नुपर्दछ। छिटोछिटो र कहिले काँही प्रयोग गरीन्छ, एडविलले ध्यान फिर्ताको लक्षण देखा पर्दैन जब बन्द हुन्छ।
जहाँसम्म, यदि एडविल टाउको दुख्ने (१ per दिन वा अधिक प्रति महिना) को लागि क्रॉनिक रूपमा प्रयोग गरीन्छ, तपाईले पल्टाउने टाउको दुखाइ विकसित गर्न सक्नुहुन्छ, सर्त भनिन्छ औषधी अत्यधिक दुखाइ । अझै पनि, एडविल अचानक प्रयोग गर्न सकिएन यदि अत्यधिक प्रयोग भए पनि। यदि परामर्श १ 15 दिन वा अधिक महिनाको लागि लिइएको छ भने, पेशेवर चिकित्सा सल्लाह लिनुहोस्। तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले टाउको दुख्ने रोक्नको लागि उपचार योजना विकास गर्न मद्दत गर्न सक्छ, र जब ती हुन्छन् तिनीहरूलाई उपचार गर्दछ।
10 दिन भन्दा बढि दुखाइ बिग्रन्छ वा जारी रहन्छ वा ज्वरो तीन दिन भन्दा बढि रहन्छ वा १०3 डिग्री एफ भन्दा माथि उठ्छ भने एडविल लिन रोक्नुहोस्।। अत्यन्त दुर्लभ मामिलाहरूमा, एडभिलले गम्भीर र सम्भावित जीवन-जोखिमयुक्त छाला प्रतिक्रिया देखा पर्न सक्छ। एडभिल लिन रोक्नुहोस् र गम्भीर एलर्जी प्रतिक्रिया जस्तो कि लालिमा, सूजन, दाग, बैजनी छाला, वा छाला को कुनै संकेत मा आपतकालीन चिकित्सा सेवा खोज्नुहोस्।
एडविलको सट्टा के प्रयोग गर्न सकिन्छ?
Nonsteroidal विरोधी भड़काऊ ड्रग्स (NSAIDs) जस्तै मोट्रिन शिशु ड्रप छ महिना भन्दा बढी बच्चाहरूमा शिशुहरूको सल्लाहको ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। उपयुक्त उत्पाद छनौट र खुराकमा निर्देशनको लागि तपाईंको बच्चाको बाल रोग विशेषज्ञको परामर्श लिनुहोस्। साथै, सामान्य सूत्रहरू उपलब्ध छन्।
सल्लाहकारका लागि अधिकतम खुराक कति छ?
एडभिलको अधिकतम दैनिक खुराक १२०० मिलिग्राम हो, तर ईबूप्रोफेनको अधिकतम दैनिक खुराक 00२०० मिग्रा रुमेटोइड जस्तो सर्तहरूको लागि हो। गठिया , ओस्टियोआर्थराइटिस, ankylosing spondylitis, गाउट , लुपस, र अन्य भ्रामक अवस्थाहरू। डाक्टरले सिफारिस नगरेसम्म six घण्टाभन्दा बढी एडभिल ट्याब्लेटहरू, क्याप्लेटहरू, वा जेल क्याप्सूल (१२०० मिग्रि कुल) २ take घण्टामा कहिल्यै लिनुहोस्।
एडवेलसँग के कुराकानी हुन्छ?
सामान्य नियमको रूपमा, ईडबिल खानाको साथ सेवन गर्नु राम्रो हो ईर्ष्या, पेट दर्द, वा अन्य पाचन प्रणाली समस्याहरूलाई रोक्नको लागि। इबुप्रोफेन कहिले पनि रक्सीको साथ सेवन गर्नु हुँदैन; संयोजनले पेट खून र अन्य जठरांत्र सम्बन्धी समस्याहरूको जोखिम बढाउँदछ।
धेरै थोरै औषधिहरू वा आहार पूरकहरू कम गर्दछ एड्विलको प्रभाव पीडा निवारकको रूपमा। एउटा उल्लेखनीय अपवाद भनेको पित्त एसिड सीक्वेन्ट्रन्ट्स हो, उच्च कोलेस्ट्रोलको उपचार गर्न प्रयोग गरिने औषधीहरूको एक कोटी। यी ड्रग्सले शरीरको एडभिल र केही अन्य औषधिहरू अवशोषित गर्ने क्षमतामा हस्तक्षेप गर्दछ।
अर्कोतर्फ, क्याफिन बढ्छ आईबुप्रोफेनको दुखाइ कम गर्न जब दुबै सँगै लगिन्छ। केही दुखाइ राहत गर्नेहरूले एस्पिरिन र / वा एसिटामिनोफेनको साथ क्याफिन जोड्दछन्, तर हाल कुनै उत्पादन छैन क्याफिन र आइबुप्रोफेन संयोजन गर्दछ ।
सबै औषधिहरू जस्तै, एडविले अन्य ड्रग्ससँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्दछ। सुरू गर्नका लागि, आईबुप्रोफेनलाई अन्य ड्रग्ससँग आईबुप्रोफेन वा यस्तै एनएसएआईडीहरू जस्तै एस्पिरिन वा नेप्रोक्सेन सँग जोड्नुहोस्। संयोजनले सम्भावित गम्भीर साइड इफेक्टको जोखिम बढाउन सक्छ। विशेष गरी, आईबुप्रोफेन र अन्य एनएसएआईडीहरूले शरीरको रगतको थक्का बनाउने क्षमतामा हस्तक्षेप गर्दछन्, त्यसैले धेरै आईबुप्रोफेन लिने वा यसलाई अन्य एनएसएआईडीसँग मिसाउँदा रक्तस्राव र चोटपटकको जोखिम बढ्छ। दुखाई औषधीहरूको संयोजन गर्नु अघि सधैं पेशेवर चिकित्सा सल्लाह खोज्नुहोस्।
उही कारणका लागि, एडविललाई एन्टीकोआगुलेन्ट औषधी वा केहि एन्टिडिप्रेस्रेस (एसएसआरआई, एसएनआरआई) को साथ लिनु हुँदैन। संयोजनले सम्भावित खतरनाक रक्तस्राव एपिसोडहरूको परिणाम दिन सक्छ। धेरै डाईटरी वा हर्बल पूरकहरू पनि हुन्छन् anticoagulant गुणहरू । फ्याट-घुलनशील (एडीईके) भिटामिन, फोलेट सप्लीमेन्ट्स, ओमेगा3फ्याट्टी एसिड, माछाको तेल, अदुवा, लसुन र अन्य थुप्रै पूरकहरू जमावट समस्या र रक्तस्राव एपिसोडसँग सम्बन्धित छ। एक स्वास्थ्य सेवा पेशेवर संग कुरा गर्नुहोस् यदि तपाइँ पूरकको साथ आईबुप्रोफेन लिइरहनु भएको छ।
सलाहकारलाई पनि सेलेक्टि ser सेरोटोनिन रिअपटेक इन्हिबिटर (एसएसआरआई) को साथ लिनु हुँदैन। यी औषधिहरू, सामान्यतया डिप्रेसनको उपचार गर्न प्रयोग गरिएको, एन्टिकोआगुलेन्ट प्रभावहरू पनि छन्। जब एडविल वा यस्तै प्रकारको ड्रग्ससँग मिसाइन्छ, संयोजनले जोखिमलाई ठूलो पार्दछ जठरांत्र रक्तस्राव ।
इबुप्रोफेनले एसीई अवरोधकर्ताहरू, बिटा-ब्लकरहरू, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लकरहरू, र डायरेटिक्स जस्ता रक्तचापको औषधोपचार सहित केही महत्त्वपूर्ण पर्चेको औषधीहरूको प्रभावकारिता कम गर्दछ। यी केहि औषधिहरूसँग सल्लाहकारलाई जोड्दा सल्लाहकारका साइड इफेक्टको जोखिम पनि बढ्छ।
सल्लाह , Epocrates
सल्लाह सल्लाह , GlaxoSmithKline
घरपालुवा जनावरहरुको लागी पीडा मुक्त गर्ने बारे तथ्यहरु पाउनुहोस् , खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए)
इबुप्रोफेन , StatPearls
इबुप्रोफेन कम्पाउन्ड सारांश , औषधि राष्ट्रिय पुस्तकालय
पलटाउ टाउको दुराचारी चक्र रोक्दै , हार्वर्ड स्वास्थ्य प्रकाशन
चयनित आहार पूरकहरूको एन्टिकोआगुलेन्ट गतिविधि , पोषण समीक्षा
आईपुप्रोफेनको स्तन दुधमा विसर्जन , अमेरिकी जर्नल Oब्स्टेट्रिक्स र स्त्री रोगविज्ञान
इबुप्रोफेन , ड्रग्स र Lacation डाटाबेस
इबुप्रोफेन विषाक्तता , StatPearls
के आइबुप्रोफेन र क्याफिनको संयोजन टेन्सन-प्रकारको टाउकोको उपचारको लागि प्रभावकारी छ ? पारिवारिक अभ्यासको जर्नल
ओभर-द-काउन्टर (OTC) आईबुप्रोफेन: हृदय सुरक्षा र उपभोक्ता उपयोग , खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए)
Tretinoin साइड इफेक्ट र अन्तर्क्रियाहरू जान्नुहोस् — र तिनीहरूलाई कसरी हटाउने
prozac एक औषधि स्क्रिनमा देखा पर्नेछ
प्राकृतिक जडिबुटी सीधा रोग संग मद्दत गर्न
तपाइँलाई भाइरल संक्रमण छ भने के खाने
कती समय लाग्छ यो मुँहासे मद्दत गर्न को लागी जन्म नियन्त्रण को लागी
lantus र levemir बीच के फरक छ?